izincwadi Russian of nekhulu le-19 nelesi-20 leminyaka - umthombo izigcawu eqinile okukhulu, izinhlamvu ezicacile, ecebile izinhlamvu ezimibalabala. Isithombe yendlu izincwadi Russian - kwezinkulumo ezinamandla kakhulu, inkomba, amehlo nokumenza abe. "Indlu," ibonisa abalobi kanye izimbongi we imiqondo sizokwenza ukuhlola kulesi sihloko.
Kuye kwanyatheliswa izincwadi kwekhulu le-19. Amazwibela
Le nkathi izincwadi - kwezinkulumo ezinamandla kakhulu, esinamandla kunquma isiphetho kokubili izincwadi isiRashiya e jikelele. Wabizwa "inkathi yokuchuma izinkondlo." Kodwa temibhalo yephrozi netindzaba leyo minyaka, futhi, wayengeyena eliphansi, kungaba ngokuphepha ngokuthi imodeli azalelwa izimiso uhlamvu.
Kuleli khulu wasebenza Pushkin futhi uthisha wakhe Zhukovsky, Tiutchev futhi Fet. Umhlaba abadumile uLeo Tolstoy futhi Fedor Mihaylovich Dostoevsky, laseChekhov futhi Gorky izimbangi, Nekrasov futhi Turgenev wadala amapharele zabo, manje eyaziwa emhlabeni wonke. Ngalesi sikhathi kuye kwaba izithombe eziningi ayakufanelekela. Isithombe yendlu izincwadi Russian wesikhathi - omunye ezinamandla kakhulu futhi ongasoze, wanika izici bomdabu Russian futhi ngesikhathi esifanayo sivune izitayela ezintsha emhlabeni jikelele.
Century waqala ukuthuthukiswa romanticism, okuyinto kancane kancane iyiswe okwangempela Nokubhekana Namaqiniso nomphakathi. Amahlaya imisebenzi yayenziwa kwakwande asabisayo izinguquko kanye isifiso sokushintsha.
Isithombe yendlu izincwadi Russian kwekhulu le-19
Umqondo "endlini" ngokuvamile kuhambisana ne welithi "lenkaba". Mhlawumbe yingakho abalobi 19 endlini ekhulwini zeziyaluyalu elinikwe a lot of ukunakwa. ngokuvamile indlu sasiyindawo eyinhloko esenzweni, izenzakalo ezimangalisayo kakhulu okwenzeka kuwo. Heroes Ezezindlu elihlobene ne amasiko abo yokhokho futhi izimiso zomkhaya.
Abalobi abaningi baye efakwe izindaba zabo emhlabeni nezindlu nabalingiswa abasemqoka nalabo yesibili. Indlu lihlotshaniswa kumnikazi ilk yakhe.
Isithombe yendlu ku temibhalo yephrozi netindzaba classical kwekhulu XIX
Sizobheka isithombe yendlu e amakhosi amathathu yisakhiwo sodumo yokukhuluma wobuciko: Pushkin, UTolstoy futhi laseChekhov.
Ngenxa A. S. Pushkinu isithombe yendlu izincwadi Russian has ukutolika ezimbili. Ake sihlole kubo ngokuningiliziwe ku isibonelo kule noveli "Eugene Onegin" kanye protagonists zalo - Eugene Tatiana.
Ukuze Eugene indlu - indawo isicefe uphumule. Ukuze umuzi wakhe ikakhulukazi sengqondo enenhlonipho Eugene engazizwa. Enye into - Tatiana sekhaya. Ekhaya, yena Ukuthunga, ukufunda kanye ukuphupha. She - a umqaphindlu Okuyınqo, Indlu yakhe iyindlela ethokomele kakhulu futhi zikhululekile. Mhlawumbe yilesi sizathu esenza ke ngakho ukwenqaba kalula imizwa okungazelele Onegin. Uneziqu Okuyınqo, indlu esezingeni elifanele, futhi manje isisezweni - inani layo eliphakeme. Futhi umfundi uyabona ukuthi Tatiana ngisho nemicabango kungemngcolise emizini yabo, ukuthi izenzo e umlingisi inoveli umphefumulo wakhe, uma umnyango ivaliwe umuntu othile, kuba phakade. Ngakho isithombe yendlu e Pushkin iwuphawu ukuthula, ukuthula, ubumsulwa.
Isithombe yendlu e Lva Tolstogo kancane sihluke nokuchazwa Pushkin. A umehluko okuphawulekayo ukuthi i-UTolstoy kanye nezindlu sekuba indawo enkulu isinyathelo, futhi "isidleke umndeni", umsuka ubunjalo uhlobo namasiko alo, umlando kanye imfihlakalo. izenzakalo ezibaluleke kakhulu "Impi Nokuthula" e emizini Rostov futhi Bolkonsky (futhi Kuragin). Kulokhu, kuyafaneleka ukukhumbula ukuhumusha isihloko lo msebenzi omkhulukazi. Umqondo "impi" alidingi incazelo, kodwa umqondo zomhlaba lapha - hhayi "isimo NEvoyny" nokuthula olunzulu abantu ezimpilweni zabo. Empeleni, kule amanoveli ka Lva Tolstogo izincazelo yezindlu ngaphakathi nangaphandle, ingaphakathi zabo kanti nomoya unikezwa eningi isikhala, kuba isithombe ekhaya UTolstoy sika nomndeni izincwadi Russian ngeke ube yisibonelo izindlalifa eziningi amasiko zakudala etemibhalo.
Ngo A. umqondo P.Chehova ikhaya kwembulwe ngokuningiliziwe enkulu ngesikhathi sokudlala ngokutjhaphuluka singathatha yakhe yakamuva "I Cherry Orchard." Uzungu indaba uhlobo enhle ngenxa yezimo ezinzima zokuphila ilahlekelwa patrimony yayo futhi uphoqelekile ukuba ahlukane othandekayo cherry engadini yezithelo wakhe. Imisebenzi umbhali omkhulu esenza zesikhathi esidlule nezamanje, i-sublime kanye kwansuku zonke. Indlu lapha lifanekisela esidlekeni umndeni nokududuza, nokuqunga isibindi, futhi enamandla 'simi ngezinyawo zabo, "Ranevskayas umndeni. Lapho they dayisa endlini bese ukuhambisa ngemva kokufa yendodana yakhe, konke esiphendula esibhekisa phansi. I Cherry Orchard, kubonakala, akanayo value impahla kakhulu. Kodwa ukubaluleka kwalo akabalwa imali, indlu Bekumumuzi umzimba, futhi engadini - umphefumulo uhlobo.
isifinyezo emfushane yemisebenzi
Izinhlobonhlobo amazing ngezihloko ucwaningo angasinika isithombe yendlu izincwadi Russian. Ukwakhiwa, ngeshwa, awakwazi ukuveza bonke shades of incazelo ekhaya ngoba abalobi bekhulu XIX, kodwa asikwazi fingqa ngokugqamisa ezivamile main kubo bonke izici:
House - njengoba isidleke.
Limele isiko nomlando ukuhlunga.
Kuyinto ngokuvamile primary site of action komkhiqizo.
Laba balobi abazange bashiye inki ukuchaza ekhaya ka izinhlamvu zakhe. Amaningi awo ayephila e njengefa kusukela oyise omkhulu Estates ezaziswayo babemhlonipha. Indlela endlini futhi abayitholayo kakhulu inquma ubunjalo umlingisi, khona / ukungabikho adventure kuwo.
Kuye kwanyatheliswa izincwadi kwekhulu XX. Uhlolojikelele
Endaweni emasikweni etemibhalo kwekhulu XIX kwaba inselele emisha ye XX leminyaka. Isithombe yendlu izincwadi Russian kwekhulu lama-20 liyoba izici okuhluke kakhulu kuneyokuqala leminyaka.
Le nkathi izoba abalutholayo kamuva owabizwa ngokuthi "Isiliva Age". Kuthatha eziningi imithombo kanye izitayela ekuthuthukiseni nelayelo. Namaqiniso ingena yesimanjemanje kanye yesimanjemanje Liyashabalala ku eziningi zezingxenye-imisinga: Acmeism futhi futurism, kufanekisa kanye avant-garde. izingqikithi Key futhi nezindaba: injongo yokuphila nokufa, namaphuzu inselele zokuziphatha okuphakade, search for isitayela "entsha" futhi iqhawe elisha. Inkolo nezimfihlakalo baba izimbangi, izindleko emasikweni awo, kokubili sawela wahamba zilinganisene ihlombe nehlombe.
Lonyaka imakwe lokusungula izimbongi ezifana Yesenin futhi Ahmatova Mayakovsky futhi uvimbele isimanga Velemir Hlebnikov Sologub futhi kudabukisa. Eyiqiniso akuyona emuva ekuthuthukisweni kwabo nokusesha amasiko amasha. Dala Manifesto yakho Merezhkovsky, Gorky kusukela romanticism ukuze okwangempela uya. Lesi isikhathi ukubhala brilliant "Doctor Zhivago" by B. Pasternak futhi uqede umsebenzi "Imiphefumulo Dead" uN Gogol.
Isithombe yendlu ku izincwadi Russian kwekhulu lama-20. Le noveli "The House," Abramova
Umlobi F. abramov ozungezayo yakho indaba nezikulu ngokuthi - "House." Kuyo, ukhuluma ngokufa nokwehla emaphandleni aseRussia.
I protagonist ebuya endlini zikadadewabo edolobhaneni elincane futhi ukhumbula isikhathi sokuhlala kwakhe lapho. Against ngemuva yendlu zisashisa izenzakalo main emphilweni umndeni.
Kamuva, indlu kuzobe kudayiswa futhi babe uphawu zamadijithi amabili: kulolu hlangothi, esemdala futhi kudingeka kube ukwaziswa okusha, kodwa ngakolunye - konke izinkumbulo, kwakukhona amandla futhi ukuziphatha nokuthembela kwakhe. Heroine noveli ngu Lisa amabutho zokugcina ukulungele nilwele indlu kayise, waze isigamu-zonakale emzini wakhe ehlaselwe umthengisi akusho bangafuni izandla.
Indlu Pasternak futhi Gogol
Isithombe yendlu emisebenzini Russian etemibhalo kuboniswe ngokucacile ngu uBoris Pasternak sika "Doctor Zhivago." Lapha, ekhaya uba indlela yokucabanga kanye nendawo yokuhlala ivikela umhlaba engaphakathi iqhawe kusukela ukuphazamiseka ngaphandle. Kodwa wokugoqa endlini, futhi mhlawumbe kukhona ongaphezu isikhumbuzo sokuthi udinga ukuba ugcine imicabango yakho, hhayi kuphela ngaphakathi kwezindonga ezine ukuthi kudingeka ukuba bakwazi ukuba ngokwabo, futhi isixuku.
Gogol ekhaya "Imiphefumulo Dead" yakhe liba nencazelo ngokuphelele basezinganekwaneni futhi ongokomfanekiso. Eliya Manor isithombe edabukisayo kwamazinyo nokubhujiswa, ukubola kanye nokunganakwa. Isithombe yendlu izincwadi Russian akukaze kuboniswe esibi ezifana. Futhi zonke ngenxa yendlela UNikolai endlini efihla umphefumulo womnikazi wayo - Eliya. Usemdala futhi kakhulu ingagxili yalelozwe yakhe abampofu, manje yiso kanye isikhathi, noma babuyiselwe, ukuqeda elidala, noma ziyawa, zingcwaba ngaphansi emanxiweni nokuguga yakhe.
Njalo yobudala zakhe ukubona amaqhawe abo. isithombe esihlukile nje yendlu ivela izincwadi Russian (indzaba mayelana kokubili nezikhathi uzokunika umbono isiyonke igama lesakhiwo esikulesi XIX futhi XX eminyaka).
Century eyandulela endlini limelela esidlekeni umndeni, Igumbi yesiko kanye lokuzalwa izindaba, isihloko ukuthi lizokwenza hhayi kuphela izinhlamvu kodwa futhi isiphetho izinhlamvu.
Ikhulu lamashumi amabili kungokwalabo ikhaya ihlukile kakade. Kuba uphawu Ingahlehlela futhi ngezinye izikhathi idinga ukubuyekezwa, bese ukususa ke.
izenzo Complex futhi edidayo isithombe yendlu izincwadi Russian. Izimpikiswano ingatholakala yemisebenzi ngokwayo.
Dzhenni Lukas: Biography nesithombe
Lezi zingcezu ezahlukene kweNyuka
Pasta ku-microwave: zokupheka
Gardnerellez: Izimpawu kanye Sifo
Iyini igastritis. Izimpawu ze-gastritis
Museum of History kwedolobha Chelny: incazelo, setfulo, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza
Kwedolo Ligamentoz: ukuthi kuyini, izimbangela kanye nokwelashwa
Umklami Bauer: playsets ethandwa nomlando sha eRussia
Indlela thunga ithawula wobhapathizo ngezandla zakho?